HomeBULUUQUL MARAAM PDF
Author: Zulkigul Vudotilar
Hadduu xadiisku dheer yahay, faqra kasta cinwaan-hoosaad baanu u samaynay si akhrintu u fududaato. Hadduu ey afka la galo weelkii oo uu afka geliyo markaas daahirinta la daahirinayaa waxa weeyaan inuu dhaqo todoba goor inuu dhaqo midda ugu horraysaayu ciid mid lagu daray ay tahay.
Laakiin hadday biyuhu yar yihiin oo qullatayn ubluuqul ka yar yihiin nijaaso waa aqbalayaan weeyaan oo way nijaasoobayaan. Abii Daawuudna magiciisa waxaa la yiraahaa Sulaymaan ibn Ashcas asSijistaanii.
Saddexdaasuba mid waliba kitaab saxiix uu ku magacaabay buu leeyahay, oo way saxiix yeeleen. Wajibad waa ururiyaha qoraalada diiniga ah si ay dadka jeceli inay bartaan diintood ugu fududaato akhrinta iyo daabacaada qoraalada oo af-Somali iyo English ka kooban Inshaa Allaah hadan waxaan ku guda jirtaa si aan ugu soo kordhin lahayn qoraalada Carabiga ah.
Haddiiba afkiisu ugu nadiifsanaa jirkiisa waxa weeyaan inta kale way ka sii liidataa. Maadaama ay dikri tahayna sideeda in loo adeegsado ayaa fiican.
Bulugul maraam (kitaabaguutuu) – afaan oromoo – Muhammad waadoo
Xadiiska markaa isaga macnihiisu waxaa weeyaan eygu weelkuu afka la galo inuu nijaasoobayo weelkii iyo sharaabkii ku jireyba. Abii Hurayrah radiyal Laahu canhu waxaa laga weriyey in uu yiri: Kuwa kalena markaa xagga macnaha ayey iyaguna ku weriyeen. Isagoo masjidkii meel kale kaadidii sii gaarsiiyaana mafsada kalay ahayd. Labada arrimood ee xun middoodi dhib yar yaa la doortaa.
Alle- sarreeye- wuxuu yiri: Saasay riwaayadani keenaysaa, laakiin haddii aan lagu kaajin in lagu qabeysan karo bay keenaysaa. Markuu saxaroodo eygu ukumo yaryar oo dixrigaasu uu leeyahay oo aad iyo aad u fara badan ayaa soo baxaysoo saxaradiisa soo raacaysa. Taas waxaa kale oo la mid ah, subxaananuhuu wa tacaalaa, radiyal Laahu canhu ama raximahul Laah, oo aan doorbidnay sidooda Muslimiintu ay u adeegsanayeen weligood inaan u deyno ee aanan waxba turjumin, macnahooduna waa iska cadyahay, Soomaalida badankooduna way fahmayaan.
Xadiiskanu waa kaan kitaabka kalena kusoo marray ee dhahaayey: Wayna maraam duwan tahay xadiiskaasu daciif weeye iyo xadiiskaa dacfi baa ku jira. Markaa sidaa macnaheedu waxa weeyaan biyihii haddii lagu kaajo fadhiyey inay saa ku nijaasoobayaan, waa inayse biyahaasu yihiin biyo yar oo qullataynka ka yar.
Taasi waxay keentay inaan sidan u soomaaliyeyno: Soomaaliyeyntaasi waa mid caan ah oo culumadoo dhani intaan maqlay adeegsadaan xertana la baro. Laba mafsadood yaa lasoo gudbanaatay: Qeyrkoodna xadiiska waa ubluuqul oo isaguna waa saxiix.
Xadiiskan oo kale Abuu Saciid al Khudrii yaa isaguna weriyey oo waxaa laga helayaa: Af Soomaaliga la qoro iyo Af Soomaaliga dadka intooda badani ku hadlaan way kala gedisan yihiin, tanina waxay sababtay inaan isku dayno inaan waxoogaa yara hagaajino qoraalkii aan cajaladaha ka qornay anagoo yaranayna isbedel ku yimaada sheekha hadalkiisa.
Markaa dacfi khafiif ah ayaa ku jira. Kii horena waa amray ka soo socdaana waa sheegi doonaa. Sheekhu wuxuu casharada u akhrinayaa arday xer ah oo uu kitaabo kale usoo akhriyey, sida Riyaadus Saalixiinka, goobta uu casharada ka akhrinayaana waa Makkah.
Taas macnaheedu waxa weeyaan qoraalka [ku dhex jira labadan qaws] kama mid aha hadalkii sheekha. Biluuqul waa silsiladda dadka kala weriyey laba bilaabo shaykha kitaabkiisa ku qoray ilaa Rasuulka-sallal Laahu calayhi wasallam. Notify me of new comments via email.